Ọkụkọ na -ekpuchi Donut - Goodao Technology Co., Ltd.
A na-eji ọkụkọ ekechiri rawut nke ọkụkọ na-enye ara ara ọkụkọ zuru oke yana nchekwa dị mma. Ihe ndị bụ isi bụ ara ọkụkọ na rawhide. Ngwaahịa ahụ enweghị ọka, ọka, ọka wit ma ọ bụ soy. N'ezie, etinyeghị ihe eji eme ihe. Ọ dị mfe igwu nri na ata na-adịte aka na-enyere anụ ụlọ gị aka idebe teeh dị ọcha na ọnụ ọhụrụ.
Protein Crube: 58%min
Oke mmanu: 1.5% max
Aha ngwaahịa Ọkụkọ kewara Donut Rawhide
Ngwaahịa bụ isi ihe Ọkụkọ, mkpuchi
Ngwongwo na-agba ọsọ nke ọma, ndị ọrụ ego na-enweta ego ruru eru, na ụlọ ọrụ ka emechara ire ahịa; Anyị abụrụla ndị anyị hụrụ n'anya dị n'otu, onye ọ bụla na -anọgide na nzukọ na -erite uru "ịdị n'otu, mkpebi siri ike, ntachi obi" maka ọnụ ala dị ọnụ ala China Pressed Rawhide Bone Pet Product, Anyị na -etinye ezi obi na ahụike dịka ibu ọrụ mbụ. Anyị nwere otu azụmaahịa mba ofesi ruru eru nke gụsịrị akwụkwọ na America. Anyị bụ ndị mmekọ azụmahịa gị ọzọ.
Ọnụahịa dị ọnụ ala China Pet Product na Pet Snack price, Dị ka otu nwere ahụmịhe, anyị na -anabatakwa usoro ahaziri ma mee ka ọ dị ka foto gị ma ọ bụ nlele na -akọwapụta nkọwapụta yana ngwugwu ndị ahịa. Ebumnuche ebumnuche nke ụlọ ọrụ anyị bụ iwulite ndị ahịa niile ebe nchekwa na-eju afọ, wee guzobe mmekọrịta azụmaahịa mmeri mmeri ogologo oge. Họrọ anyị, anyị na -echere ọdịdị gị oge niile!
Nke gara aga: Mgbanaka Sanwichi Chicken & Cod
Osote: Chicken osikapa dumbbell
Chicken kechie nduku nduku